घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू जर्मन फुटबल खेलाडीहरू जुलियन ड्रेक्सलर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
LB एक फुटबल जीनियस को पूर्ण कहानी प्रस्तुत गर्दछ जो उपनाम द्वारा प्रसिद्ध हो; "Jule"। हाम्रो जूलियन्स ड्रेक्सलर बचपन स्टोरी प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपनको समय बाट उल्लेखनीय घटनाहरु को पूरा खाता ल्याउनुहुन्छ। विश्लेषणमा उनको जीवनको कथा, प्रसिद्धि, सम्बन्ध जीवन / विवादास्पद, पारिवारिक जीवन र उनको बारेमा अन्य केही-पिच साना ज्ञात तथ्याङ्क भन्दा पहिलेको कथा समावेश छ।
हो, सबैलाई आफ्नो क्षमताहरु को बारे मा थाहा छ तर केहि कमले जुलियन ड्रक्सलरको जीवनी विचार गर्छ जुन एकदम चाखलाग्दो छ। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
जुलियन ड्रक्सलर बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
जुलियन ड्रक्सलरको जन्म २० सेप्टेम्बर १ 20 1993 G मा ग्लेडबेक, उत्तर राइन-वेस्टफालियाको शहरमा भएको थियो, जर्मनी। उनी आफ्नो आमा, मोनिका ड्रेक्सलर (एक घरपरिवार) र उनको बुबा, हन्स-जुर्गेन ड्रेक्सलर (पूर्व शौकिया फुटबलर र तिनको छोराको वर्तमान प्रबन्धक) मा जन्मिएका थिए।
जुलियनको ब्लू कलर जडहरू थिए। उहाँले कोइला-खनन औद्योगिक क्षेत्रमा आफ्ना भाइबहिनीहरूसँग बसाल्नुभयो जहाँ नीलो कलरहरू कामदारहरू उच्च थिए।
यो फुटबलमा पनि स्थानीय प्रतिभा उत्पादन गर्न ज्ञात प्रवासी थियो। यो कहाँ मन पर्यो Mesut Ozil र लेरोया सेन (दुवै प्रवासीहरू) बाट आए। समुदायको लागि फुटबल स्काउटिंग क्षेत्र थियो FC Schalke 04।
आफ्नो समुदायको स्थानीय संस्कृतिमा खण्डित कार्य-शैली इथियो युवा फुटबलर्स प्रजनन गर्ने काममा एक प्रभावशाली प्रभाव पर्दछ।
यद्यपि, जुलियन ड्रक्सलरको केस फरक छ। उनले स्पष्ट रूपमा हिंड्न सक्ने सक्दो चाँडो एक बल लात थियो। उनका फुटबलर बन्ने चाहनाको निर्णय उहाँको बुबाले उहाँलाई बच्चाको रूपमा श्ल्के खेलमा लगत्तै सुरु गर्नुभयो - जस टोलीमा उसले हस्ताक्षर गर्यो। यद्यपि उनले क्लबको युवा प्रणाली मार्फत आफ्नो क्यारियर सुरु गरेनन्।
जूलियन5को उमेर मा BV भाडाफोर्टको साथ घाँस जड फुटबल शुरु गर्यो। तल Rentfort को लागि उनको आईडी कार्ड हो।
उनी ent बर्ष नभएसम्म रेन्टफर्ट खेले। त्यहाँ, ऊ अरू बच्चाहरू भन्दा फरक देखिए। उसले हासिल गर्यो जुन कुनै बच्चाले कहिल्यै हासिल गरेको थिएन। उहाँ हरियो पिच वा बालुवामा फुटबल खेल्ने क्रममा आफ्नो वेग र तीव्रताको लागि परिचित थिए।
भण्डारणको प्रारम्भिक वृद्धिले धेरै युवा क्लबहरूलाई शर्खको छेउमा घुम्न थाल्यो। जुलियनले आफ्नो प्रारम्भिक किशोर वर्षहरूमा आफ्नो पहिलो स्थानान्तरण पूरा गर्यो। यो धेरै सम्भावना थिएन त्यसैले यस्तो उमेरको कोही युवा युवा क्लबहरूको स्थानान्तरण बजेटमा राख्नु पर्छ।
जुलियनलाई एसएसभी बुअरले उनको गृहनगर क्लब बीभी रेन्टफोर्टबाट किनेका थिए। यो एक बर्ष मा लागेन FC Schalke 04 निर्माण मा प्रारम्भिक प्रतिभा को हवा मिल्यो। तिनीहरूले 2001 मा उनको सेवाहरू प्राप्त गरे।
जुलियन ड्रक्सलर बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
त्यहाँ कुनै पनि मानिसलाई गर्भपतन प्यारीसँग प्रेममा भन्दा बढी गर्व गर्न सक्छ कि केहि छैन। विशेष गरी तपाईं 5th ग्रेड पछि जान्नुभयो। यो जुलियन ड्रेक्सलर को मामला हो।
Jlina लेना स्टिफेललाई भेटे जब तिनीहरू 5th औं कक्षामा थिए। दुबै भेला भए उनीहरू एकै स्कूलमा पढ्दा। वास्तवमा तिनीहरू एक समय सहपाठी थिए। उहाँ एक्लैले लोकप्रिय फुटबलर हुनुहुन्छ जससँग आफ्नो बाल्यावस्थाको साथी छ। तलको फोटोमा देखाएकी लेना उनको पुरुषको क्यारियरको बारेमा अत्यन्त जोशिलो छिन।
उनका आमाबुबा ड्रक्सलरहरूसँग उनीहरू जन्मिनु अघि नै साथीहरू थिए। उनीहरूले आफ्नो बाल्यावस्थाको धेरै खेलहरू खेल्यो, श्ल्चे म्याचहरूमा गए, र प्रत्येक पटक तिनीहरूको परिवारहरूले एक अर्कालाई पार्टीको लागि होस्ट गरे।
उनीहरूको सम्बन्ध सुखद क्षणहरू साझेदारी गर्ने मात्र होइन। तर हार्दिक बाक्लो र पातलो अवस्थामा उनीहरूको सामूहिक शक्ति। लीना संसारमा एक मात्र महिला हुन् जसले उनको मान्छेबाट आँसु पुछिन्। तल दुबै प्रेमबर्ड्स तिनीहरूको सत्यताको क्षण साझा गर्दै छन्; रोमियो र ज्युलियटको प्रेम संसारको रंगमञ्चमा शुरू भयो।
जुलियन र लीनाले बाक्लो र पातलो परिस्थितिहरूमा सामूहिक शक्ति देखाउँछन्।
जुलियन ड्रक्सलर बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -प्रेममा अर्को साथ
ड्रेक्सलरले एकपटक प्रलोभनमा सहभागी गरेका छन् जसले लेनासँगको सम्बन्धलाई हटाउनेछ। यो क्लिसिया को एक मामला हो जो जुलियन ड्रेक्सलर मा लगभग दुई वर्ष को लागी एक कुशलता को रखरखाव गरिरहेको छ। उनले तिनलाई कहिल्यै पनि भन्न सकेन किनभने जुलियनले वर्षको लागि लिना संग भएको थियो।
क्लर्सा एक अर्थशास्त्रीय विद्यार्थीले एन्ड्रयूसँग बाहिर जाने क्रममा उनी विश्वविद्यालयमा भेटिए। उनले उनको साथ तोडिदिए किनभने उनी अन्ततः थाहा पाए कि जुलियनलाई उनको आकर्षण मित्रता भन्दा बढी थियो र उनीहरुले एन्टिभाइज गरेपछि उनी एन्ड्रयू जारी गर्न सक्थे। दुर्भाग्यवश, उनी एन्ड्रयूसँग भत्किएपछि त्यही समय जुलियनले लेनासँग सम्बन्ध सम्बन्ध राखेका थिए। यसले उनको निराश छोड्यो। प्रतिवेदनले संकेत गर्दछ कि जूलियन अझै उनको साथ प्रेममा छ र यसलाई फेरि भित्र गर्न एकल हुन सक्छ।
अनसेटटुल जुलियन- प्रेम घोटाला।
जुलियन ड्रक्सलर बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
जूलियन एक परिवारबाट आउछ जहाँ सबै पृथ्वीमा छ। एक पटक मध्य-परिवार परिवार अचानक फर्केर गए जर्मन प्रथम श्रेणीका नागरिकहरू सबै फुटबलबाट ठूलो धनको लागि धन्यवाद।
फेथर: हंस-जर्जन ड्रक्सलर उनका छोरा जुलियन फुटबलको प्रेममा परेको कारण नै थियो। एक पेशेवर फुटबलर हुन असफल पछि, उनले सबै आफ्नो छोरालाई सल्चले ० 04 को घरको खेलहरू हेर्न लैजानुन्थे। यही ठाउँमा ड्रक्सलर परिवारमा फुटबललाई फेरि जीवन्त बनाइएको थियो। हंस-जर्जन ड्रक्सलर हाल आफ्नो छोराको क्यारियरको व्यवस्थापन गर्दछ।
जुलियन ड्रक्सलर र उनका बुवा, हान्स-जर्जन ड्रक्सलर।
मातृभाषा: मोनिका ड्रक्सलर जुलियन ड्रक्सलरको आमा हुन्। उनी एक हुन् जसले सधै आफ्नो छोराको चारैतिर आँधीबेहरी देखिन्। उनको शब्दहरु मा ..."मेरो केटा मेरो सपना जीवित छ!" "म पनि," जुलियन चाँडै थप्छ। एक पल्ट एक पटक, मोन्काले आफ्नो छोरोलाई चुम्बनको लागि खडा माथि ल्याउन अनुरोध गरे जुन जूलियनले कहिल्यै हिचाइ गरेनन्। कस्तो प्यारी आमा-छोराको सम्बन्ध !.
जुलियन, आमा, मोनिका फ्यानहरूको अगाडि आफ्नो छोरालाई चुम्बन गर्छिन्।
ग्रैंडमोथ: जुलियनकी हजुरआमा अहिले आफ्नो जीवनका बाँकी केही वर्षहरू खुशी हजुरआमाको रूपमा बाँचिरहेकी छिन् जसले आफ्नो नातिनालाई उनको सम्पूर्ण महिमामा खेल्नको निम्ति मात्र केही गरेनन्। तल उनको छोरी (मोनिका) र नातिना (जूलियन) संग उनको तस्वीर छ।
जुलियन, ग्रान्नी र आमा।
जुलियन ड्रक्सलर बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -शैक्षिक
आफ्नो खेल प्रतिष्ठा को रूप मा यहां सम्म कि, ड्रेक्सलर ले आफ्नो स्कूली-छोडेर प्रमाण पत्र को अध्ययन जारी राखन को द्वारा उनको स्तर-नेतृत्व को प्रदर्शन गरे Gesamtschule Berger Feld.
स्कूलसँग शैकल र मनपर्नेसँग लामो लामो चलिरहेको काम सम्बन्धी सम्बन्ध छ Mesut Özil, मैन्युएल Neuer सबै यसको पोर्टल को माध्यम बाट पारित। ड्रक्सलर जुलाई २०१२ मा हातमा प्रमाणपत्र लिएर विदा भए।
जुलियनले आफ्नो स्कूल छोड्ने प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दछ।
जुलियन ड्रक्सलर बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -श्ल्केको मुटु तोड्दै
जब उनी युरोपका मुट्ठीभर क्लबहरूद्वारा भेला भएका थिए, ड्रेक्सलरले शल्फलाई प्रतिद्वन्द्वी वोल्फ्सबर्गलाई अर्को गन्तव्यको रूपमा रोजे जसले ,१ अगस्ट २०१ 31 मा उनीहरूसँग पाँच बर्षे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।
उनको स्थानान्तरण पछि, जुलियन विश्वास गर्छन् कि समय परिवर्तनको लागि उपयुक्त थियो। उसको शब्दमा ... "क्लबले मलाई शानदार अवसरहरू प्रदान गर्दछ र एक अत्यन्त कडा टोली छ, ”ड्रक्सलरले भने। "म VFL संग च्याम्पियन्स लिगमा खेल्ने र उपाधिहरूको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न अगाडि छु।"
उनको निर्णयले शल्कले आफैंलाई पराजित गर्यो। उनीहरूले कहिल्यै विश्वास गरेनन् कि उनको वफादारता आफ्नो बचपनको प्रेमबाट जोगिएको थियो भने उनीहरूको क्लब उनीहरूलाई सबैभन्दा बढी चाहिन्छ।
यो पछि जिलियन लेबलिंग प्रशंसकहरु को भागहरु पछि 'यहूदा' उनको धोखाको लागि।
जुलियन ड्रक्सलर- एक पटक श्ल्के ० 04 प्रशंसकहरू द्वारा 'जुडास' को रूपमा लेबल गरिएको।
पहिलेका खेलाडीहरू जस्तै लेबल गर्दै 'यहूदा' बुन्डेस्लिगा फ्यानहरूको बीचमा सामान्य हो जसले बुन्डेस्लिगा भित्र प्रतिद्वन्द्वी क्लबहरूमा स्टार प्लेयरहरू गुमाउँछन्। मैन्युएल न्युयरले समान श्ल्केबाट यस्तै भाग्यको सामना गरे जबकि मार्को रियस र गोट्जे डार्टमन्ड फ्यानहरूले 'जुडास' भन्ने लेबल लगाएका छन्।
सबै Schalke खेलाडीहरू जस्तै, ड्रेक्सलर HATES Dortmund। उहाँले एक पटक यसो भन्नुभयो: "जबसम्म उनीहरूले मलाई ब्रेनवाश गरेनन् म म कहिल्यै डोर्टमन्डमा सम्मिलित हुने छैन।" अर्कोमा पीडादायी सम्झनाहरु लाई जान दिन, उसले VfL वोल्फ्सबर्गलाई PSG छोड्ने निर्णय गरे।
जुलियन ड्रक्सलर बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -धर्म
जुलियन एक जर्मन जन्मे यहूदी फुटबलर हो। उहाँ यहूदीहरूलाई परम्परा र परम्पराहरू समर्पित हुनुहुन्छ।
जूलियनको भनाइमा यहूदी कानूनको मूल तोरहमा छ, बाइबलको पहिलो पाँच पुस्तकहरू: उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवीयस, संख्या र व्यवस्था। अब्राहम यहूदी धर्मका जनक हुन् भनेर उनी विश्वास गर्दछन्।
हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाईं केहि देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा ठिकै लाग्दैन भने, कृपया तपाईंको टिप्पणी दिनुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्!